လက်ဖက်အုပ် နဲ့ ပုံစား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » လက်ဖက်အုပ် နဲ့ ပုံစား	41
လက်ဖက်အုပ် နဲ့ ပုံစား
Posted by ဇီဇီ on Aug 26, 2015 in Food, Drink & Recipes, Photography | 41 comments
ဒါဗျဲ။ ဒါ ပုဂံက ဝယ်လာတဲ့ လက်ဖက်အုပ်လေးလေ။
ဆွမ်းအုပ်လေးနဲ့ နောက်မှ ရိုက်အူးမယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဂျင်းသုတ်ဆိုလည်း ကြိုက်တယ် ကြက်သွန်ကြော် နှမ်း နဲ့ ဂျင်းကို ပိုကြိုက်တယ်။ ပုံစားလည်း ကြိုက်တယ်။ ပဲမှုန့်နဲ့ သုပ်စားတာလည်း ကြိုက်တယ်။
ဂျင်းသုပ်ကို ၁၂ မျိုးပြည့်အောင် စောင့်သုပ်လိုက်အူးမယ်။
လက်ဖက်ကို သုပ်တာ ပိုကြိုက်တယ်။
အောင် မိုးသူ says: လက်ဖက်အညွှန့်
ပန်းဂေါ်ဖိရော မိုးသူပြေါတဲ့ မုံလာဥဖြူရော ထည့်မစားဖူးဘူးး
kai says: လဖက်ဆောင်းပါးရေးမယ့်သူရဲ့..
အမေးခံရတဲ့မေးခွန်းအထဲမှာ.. လဖက်သုတ်ကို.. ဆလပ်ရွက်ရယ်..။ လဖက်အသားရယ်..။ ငရုပ်သီးစိမ်းရယ်ပဲပါပြီး..သုတ်စားကြတာမျိုးရှိလားလို့ပါတယ်..။
သေချာမေးတော့မှ.. မြန်မာလဖက်သုတ်က.. စိန့်တိုင်းသားတွေ..။ ဗီယက်နမ်တွေ.. ထိုင်းလူမျိုးတွေဆိုင်မှာ.. ရောင်းနေတာကိုးဗျ..။
ခုတလော.. မြန်မာဆိုင်တွေထဲ..အပေါက်ဆုံးဖြစ်ပြီး.. လူတွေတန်းစီစားနေတဲ့(ဗမာလူမျိုးမပါ)ဆိုင်တွေက..
အဲဒီမှာ.. စားပွဲထိုးဘိုမက..သံပုရာသီးကိုစတိုင်နဲ့ညစ်.. စတိုင်နဲ့ စားသုံးသူစားပွဲပေါ်တင်..နယ်မွှေပေးတယ်..။
လက်ဖက်သားကို.. ယူအက်စ်မှာထုတ်လုပ်ရောင်းရင်.. သူဌေးဖြစ်မှာသေချာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခွီးးးးး
တရုတ် နှစ်ကူးသုပ် စတိုင်နဲ့ ရောင်းနေလားမှ မသိပဲ။
အဲဒီ စတိုင်တွေ ဘေးချိတ်ပြီး ဇလုံထဲ ခုနပြေါတာတွေ အကုန်ထည့်၊
လက်နဲ့ (အဲ တခါသုံးလက်အိပ်လေးတော့ စွပ်လိုက်ပါ့မယ်လေ)
နယ်ပြီး သားကို ကျွေးချင်ထာ။
လက်ဖက် ကို ဘိုဆန်ဆန် ရောင်းရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အရသာကတော့ မြန်မာဆန်မှပဲ ရမယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: တဂျီး
ဆိုင်ရဲ့ အစားတွေပြင်ဆင်ပုံ ဒက်ကို ကတော့ အတော်မိုက်သဗျာ။
လက်ဖက် သုပ်ဖို့ ပုံထားပုံက အမိုက်စားးး
kai says: .. ဈေးကထင်တာထက်..၂ပြန်လောက်ကြီးသဗျ..။
ဆီလီကွန်ဗယ်လီထဲကစလိုက်တာ.. အခုဆို.. ၄ဆိုင်တောင်ဖြစ်သွားပြီ..။
ပထမဆုံးဆိုင်ရဲ့.. အပြင်အဆင်မှာ.. နံရံကပ်ထားတဲ့ပုံတွေကို.. ပြက္ခဒိန်ထုတ်မယ့်ဆြာတွေသေသေချာချာကြည့်သင့်တယ်..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိုက်တယ်ဗျာ။
အဲဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဒက်ကိုရေးရှင်းကို ကြိုက်တာ။
မြန်မာ အစားအသောက်အတွက် အဲဒမှာ လိုက်ကျွေးရင် မျက်နှာငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဒီမှာ လည်း တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူများတွေ ကို ခေါ်သွားလို့ ကောင်းတယ်။
@QUIL@ says: Abstract တွေများတယ်ဗျ…
ပြီးတော့ Frame အကျပ်တွေ..
တန်ရုံ မရိုက်ရဲလောက်မယ့် Crop တွေ…
kai says: ဓာတ်ပုံတွေကို… ဒီဇိုင်နာဆြာကပြင်ပလိုက်တာလို့.. ထင်တယ်..။
ဟောဟို ရွာ့ကလင်န်ဒါမှာ.. ပုံတွေသိပ်များနေရင်အဲလိုလုပ်ပစ်ပေါ့..။ Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ဖြန့်ထွက်တွေးကြည့်တာပါဗျာ…။
အခုတင်ထားတဲ့ လဘက်အုပ်လေး က ဆက်စီ ဖြစ်ပါတယ်…။
မြင်တာနဲ့ တစ်ဇွန်းလောက် နှိုက်မြည်းလိုက်ချင်စရာပါပဲ…။
သူ့ချည်းသာလော ဆိုရင်တော့ မဟုတ်ပြန်သေးဘူး။
ဘေးက ရေနွေးခွက်လေး ကို အသာဖယ်
ဒဗယ်ဘလက် လေး နဲ့ ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဗျာ…။
အောင် မိုးသူ says: Comment
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒေါ်ဘယ်ဘလက်နဲ့ တော့ မတွဲဖူးဘူးးး
ရှန်ပိန်နဲ့ တွဲပြီး နောက်ရက် အိမ်သာထဲက မထွက်ရတာတော့ မှတ်မိတယ်။
kai says: ရှုမ၀ဦးကျော်ရဲ့.. မြေးတယောက်က.. ယူအက်စ်မှာနေသဗျ..။
သူကတော့.. အရက်သောက်ရင်.. အမြည်းက.. လဖက်ချဉ်ငန်စပ်အသားချည်း..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမြည်းအတွက်ဆို ဂလိုလုပ်။
လက်ဖက်ကြမ်း ကို ဆားနဲ့ ထောင်းး
ထောင်းရင်း ငရုတ်သီးစိမ်းပါ ညက်အောင် ထည့်ထောင်း
အကုန်ညက်ရင် သံပုရာသီးကို လက်ဖက်အနှံ့စိမ့်ဝင်အောင် ညှစ်ပေး။
kai says: အရက်ကလည်း..အရသာခါးသွေးကြွ..။ လဖက်ကလည်း..အရသာဖန်ခါးသွေးရွနဲ့.. ကြွရွကြီးဖြစ်နေမလားတော့မသိ..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူတို့ မြည်းချင်တယ် ဆိုလို့ ပြေါတာပါဗျာ။
လက်ဖက်နဲ့ အကြမ်းရည်ပဲ လိုက်ပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: အူးဘလက်အဆိုကို အတည်ပြုပါတယ် ဟီး ဟီးး
ဇီဇီခင်ဇော် says: – လက်ဖက်ကို ခရမ်းချဉ်သီးလေးကို ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးကို ပါးပါးလှီးး ပြီး သံပုရာရည်၊ငံပြာရည်နဲ့ စိမ်ထား
– ဂေါ်ဖီထုတ်လေး ပါးပါးလှီးပြီး တစ်ပုံ ပုံ၊
– ဒညင်းသီးကို ပြုတ်ထားတာလေး ပါးပါးလှီးပြီး တစ်ပုံ ပုံ၊
– ကြက်သွန်နီလေး ပါးပါးလှီးပြီး တစ်ပုံ ပုံ
– ကြက်သွန်ဖြူ အသေးအမွှာလေးတွေ တစ်ပုံ၊
– ပြောင်းဖူးပြုတ်ထားတာကို ချွေထားတာကို တစ်ပုံ ပုံ၊
– ၂ ပြန်ကြော်လေး ထည့်
– ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်လေး ထည့်
– ဆား နဲ နဲ ထည့် ဆီလေး ဆမ်းပြီး နယ်လိုက်ပါ။
တစ်ချို့က သံပုရာသီးအစစ် အခွံပါးလေးတွေ ညှပ်ထည့်တယ်။
သုတ်ပြီး ပန်းကန်လှလှလေးထဲ ထည့်၊ အပေါ်က ပုဇွန်ခြောက် အကောင် လှလှလေးတွေ ဖြူးပြီး မြည်း။
Alinsett @ Maung Thura says: လက်ဖက်ကို.. ရိုးရိုး ကြွေပန်းကန်မှာ ထည့်ထားတာထက်… ဒီလို ယွန်းအုပ်ကလေးထဲ ထည့်ပြထားရင်..
ရှလွတ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ယွန်းနံ့ရယ် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း နံ့ရယ်။
ဒါတောင် လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးတို့ ကရားတို့ မရှိလို့ပေါ့ကွာ။
အောင် မိုးသူ says: တစ်ရက်တော့ ရိုက်ဦးမှပါ ခက်တာက ကိုယ်က ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ဆိုတော့။ ဒါပေသိ အမေပိုက်ဆံရရင်
ကင်မရာတစ်လုံး ပူဆာထားတယ် ရရင်တော့ ရိုက်ပြီပဲ ဟိဟိ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရိုက်စမ်းဘာ့ အေ။
Mike says: .လဖက်နဲ့ထမင်းဖြူစားရတာကိုသဘောကျတယ်…ကျောင်းတုန်းက ဆူးလေမီးသတ်ရုံးကြီးနား
.ဒေါ်ရိတ်ကြီး ဆိုတဲ့ လဖက်ဆိုင်သွားစားတာသတိရမိတယ်…နာမည်နဲ့လိုက်ပါ့
.အခုတော့ ကျုပ်နေတဲ့ ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်ထိပ်မှာတစ်ဆိုင်ရှိရဲ့..ညနေရုံးဆင်းချိန်တွေဆို
.လူစီမှစီပေါ့…ဒီတစ်ခါ ကေဇီပြန်လာရင်ဝယ်ကျွေးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ထမင်းကြမ်းနဲ့ လက်ဖက်လေး စားလိုက်
ရေနွေးလေးသောက်လိုက် နဲ့ဆို မိုက်နေရောပဲ
Ma Ma says: လက်ဖက်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်သုတ်တာ မကြိုက်ဘူး။
လူအများနဲ့ စားရရင် ကြိုက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: လက်ဖက် ထမင်းသုတ် တို့ လက်ဖက်ထမင်းကြော်တို့လည်း ကောင်းတယ်။
Ma Ei says: လက်ဖက်သုပ်ကို ငယ်ငယ်ကတော့ အဆာပလာမျိုးစုံလေကြိုက်လေပေါ့
ခုတော့ လက်ဖက်ညွန့်ဆီစိမ် ကြက်သွန်ဖြူကြော် နှမ်းလှော် ပုဇွန်ခြောက်နဲ စားရတာဘဲကြိုက်တော့တယ်…
Mr. MarGa says: တော်သေးရဲ့
ခုရက်ပိုင်းမှာ လက်ဖက်တွေ အမြင်များပြီး လက်ဖက်သုပ် (ပုံစား မဟုတ် တကယ့်အသုပ်) စားချင်စိတ်ပေါက်နေတာ
အခုထိ မွေးသမိခင် လက်ရာကလွဲရင် မတိုးဘူး ဆိုတော့လည်း………
စားရရင်တောင် အာသာပြေပါ့မလား မသိ..
အဲ…. အသုပ်တော့ ရိုက်မပြနဲ့ဦး
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဒီပိုစ့်ကို ၀င်သာဝင်ကြည့်မိတာ ပုံတွေမြင်ရမယ်မထင်ထားဘူး
.ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြားပိုစ့်တွေ ဥပမာ အဘဖေါ၊ မမ၊ ကိုမိုက်၊ စသူတွေရဲ့ပိုစ့်တွေမှာ ပုံတွေမမြင်ရလို့ …
.ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်ကျတော့ မြင်ရတာ အစားအသောက်ပိုစ့်မို့ထင်တယ် :-)
.ကျုပ်အကြိုက်ဆုံး အစားအစာထဲမှာ လဘက်က ထိပ်ဆုံးကပါပြီး
.ဒီကနေ့အထိ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ စားနေတုန်းပဲ…
.ဒီလောက်ဆေးလိပ်သောက်နေတာတောင် ကင်ဆာမဖြစ်သေးတာ လဘက်စားပြီး လဘက်ရည်ကြမ်းသောက်လို့ဖြစ်မယ် ဆိုပဲ….
” ဒီပိုစ့်ကို ၀င်သာဝင်ကြည့်မိတာ ပုံတွေမြင်ရမယ်မထင်ထားဘူး
အခြားပိုစ့်တွေ ဥပမာ အဘဖေါ၊ မမ၊ ကိုမိုက်၊ စသူတွေရဲ့ပိုစ့်တွေမှာ ပုံတွေမမြင်ရလို့ …
.ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်ကျတော့ မြင်ရတာ ”
ပုံတင်တဲ့ Style တွေ မတူကြဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
ဇီဇီ ဒီပုံတွေ ဘယ်လိုတင်တာတုန်း ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: 1. Adjust to document size 600×400 in Picture manager at PC first.
2) and Add Media From Post as usual.
That is all. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4108
” 2) Add Media From Post as usual. That is all. ”
မတူဘူး ဇီဇီ ရဲ့
ဇီဇီ ရဲ့ Post ကပုံတွေ ပေါ်ထောက်ကြည့် Arrow မျှား ဘဲ ပြတယ် ။
ဘယ်ကိုမှလဲ ဆက်မသွားဘူး ။
အဘ ရဲ့ Post ကပုံတွေ ပေါ်ထောက်ကြည့် လက်ညိုးလေး ပြတယ် ။
့ပြီးတော့ အဘတို့ Original Upload လုပ်ထားတဲ့ ၊
Gazette ရဲ့ Media Library ကို ရောက်သွားတယ် ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဘပြောမှ ပြန်ကြည့်တာ ဟုတ်တယ်။
ကျနော်ပုံတွေလည်း Media Library ထဲမှာ ရှိတယ်လေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပုံ မြင်ရတယ်ဆို တော်သေးး ဦးးပါ..
ပုံပြချင်လို့ တင်တာ ဆိုတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2389
aye.kk says: လဖက်သုပ်က
ဇီဇီခင်ဇော် says: တီအေးးပြောမှ လန့်ထှာ..
ကျနော် က တပတ် တခါလောက်ပဲ စားးတာ .. တော်သေးးး
ဦးကြောင်ကြီး says: ဖိုက်တင်းဘောဟင်း နီတခါမှ မြေးဖူးဗူးနော်….
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဥကြောင် ဥ ကို ရိုက်ပြီးမှ တင်တော့မားလို့ စဉ်းစားတာပဲ။